ကျွန်ုပ်အကြောင်းမသိသောအရာရှစ်ခု | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 2, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အိုကေ၊ အိုကေ ... ငါဒီကိုစတီဗင်ကနေယူမယ်။ ငါ့အကြောင်းကိုမသိသောအရာရှစ်ခုရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သမျှအချိန်ကတည်းကအချစ်ဆုံးသီချင်းဖြစ်သည်။ သိပ်နောက်ကျသွားပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ထဲက ၃ ယောက်ကျန်နေတယ်။ အင်တာနက်ရေဒီယိုမှာရောက်လာတယ်။ ငါခမ်းနားကြီးကျယ်သောနိဂုံးချုပ်ပြီးသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏စီအီးအိုသည်ထောင့်တစ်နေရာ၌လမ်းလျှောက်ခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆောင်သစ်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုရင်းသူ့အစ်ကိုကိုခေါ်သွားခဲ့သည်။ ငါသိတယ် ... ငါမင်းကိုသိတယ် ... မင်းလုပ်နိုင်တယ် ... ငါပြုတယ်။
ကျွန်တော့်တစ် ဦး တည်းသောညီမဒေဗောရကပဲ Britannica Britannia (sp?) အလယ်ခေတ် ၈၀ ပြည့်နှစ်ဂျင်းဘောင်းဘီ။ သင့်သူငယ်ချင်းများကိုမရပ်မနားပြောဆိုခြင်းသည်သင်၏အစ်မ၏တင်းပါးကိုကြာရှည်စွာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျနော်တို့စကားပြောခဲသော်လည်းငါဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်သူမ၏ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့အဆိုးဆုံးအလုပ်တစ်ခုကအထက်တန်းကျောင်းက Credit Card Telemarketing Agent ပဲ။ ငါ2ပတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်မည်သူမဆိုတက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ဘူး။ ငါကြိုးစားခဲ့တာ ၂ ပတ်လောက်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့အဖေကငါဟာအလုပ်တစ်ခုကိုချက်ချင်းမထွက်သင့်ဘူးလို့ပြောတယ်။ ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော့်အဖေဟာအမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိခဲ့ရတယ်။
အနှစ် ၂၀ အကြာအထက်တန်းကျောင်း၌ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းမှာကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ Mike ကကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ကိုမဖတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပတ်ပတ်လည်တိုင်းစကားပြောနေတုန်းပဲ။ သူနဲ့သူ့ဇနီးမယုံနိုင်စရာပါပဲ။
ယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအဖြစ်ဆုံးနှင့်အဆိုးရွားဆုံး ၀ ယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ကားအတွက် ၂၄″ tailgate magnet -
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကသင်သည်ကစားခြင်းကိုညတိုင်းနီးပါးအွန်လိုင်းတွင်တွေ့နိုင်သည် သက်တံ့ခြောက် XBox Live ပေါ်မှာ။
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည်တစ်လလျှင်ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၅၀၀ ကျော်ရရှိပြီးအကြီးမားဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည် စာသားလင့်ခ်ကြော်ငြာများ.
ဒီတနင်္ဂနွေကိုငါသွားမယ် အန်ပီအာရ် သင်၏လစာညှိနှိုင်းမှုတိုးတက်စေရန်အတွက်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များအသုံးချမှုကိုဆွေးနွေးရန်။ ဒါဟာအရမ်းပျော်စရာကောင်းတဲ့အင်တာဗျူးပဲ။ အလုပ်ကကားရပ်နားကားဂိုဒေါင်အထိရေဒီယိုစခန်းကိုမိနစ် ၂၀ မပြည့်ခင်မြန်မြန်လုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်စိတ်ရှုပ်သွားတယ်။ ငါထွက်လာလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမသေချာဘူး! ငါအင်တာဗျူးရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါသုံးခဲ့တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက် Salary.com ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလစာအစီရင်ခံစာ ငါ့လစာကိုညှိနှိုင်းဖို့ငါသည်လည်းအွန်လိုင်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်တယ် Payraise Calculator ကို.
ငါမှတ်စုမျိုးကိုအခြားသူများထံပေးပြီးပြီလို့ငါထင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီကိုငါဆက်မသွားတော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဖြေချင်တယ်။
သြဂုတ်လ2ရက် 2007 ခုနှစ် 11:24 နာရီ
ဘေးထွက်မှတ်စုအနေနဲ့ တစ်ချို့က TLA နဲ့ ငွေရှာရတာကို ဝမ်းသာမိပါတယ် ကြော်ငြာတစ်ခုမှ မပြဖူးပါဘူး.. နဲ့3ကြိမ်တိတိ စမ်းကြည့်ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ သူတို့ရဲ့ plugin တွေတောင်ရှိပြီး အသက်သွင်းပြီးပါပြီ.. ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ ဝန်ဆောင်မှုက ပျက်ပြယ်သွားပါပြီ။
AdSense က ပိုကောင်းတာတော့ မဟုတ်ဘူး ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ကြော်ငြာတွေ ပေါ်လာတာနဲ့ … ငါ လုံလောက်တဲ့ အရာတွေထက် ပိုမှားနေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ရက်သတ္တပတ်တွေ ကုန်ဆုံးပြီး တစ်လုံးတည်းနဲ့ ကံကောင်းသွားတာကို တွေ့ရတော့ စိတ်ပျက်စရာပါပဲ။
errr.. ooppss... တောင်းပန်ပါတယ် တစ်ဖက်သားက ရယ်လိုက်ရတာ LOL
သြဂုတ် 3, 2007 မှာ 9: 22 AM
TLA နဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ။ ကြော်ငြာတွေကို ယုံတယ်။ များမှာ ဘလော့ဂ်၏ စီမံခန့်ခွဲသူများအတွက် ဝှက်ထားသည်။ ကျွန်တော်စပွန်ဆာတစ်ခုရသွားတော့ သူတို့တကယ်ဝင်လာတော့တယ်။ တစ်ခုခု မှားနေပြီလို့ ထင်မိပေမယ့် ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ စနစ်တစ်ခုပါ။
သြဂုတ်လ3ရက် 2007 ခုနှစ် 10:10 နာရီ
အိုး.. TLA ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ကတည်းက ကိုင်ဆောင်ထားသော်လည်း ကြော်ငြာများကို တစ်ခါမှ မပြဖူးပါ.. တစ်ခါမှ ကုဒ်ကို နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သုံးကြိမ်ခွဲ၍ ဝန်ဆောင်မှုကို စမ်းကြည့်ဖူးသည်မှာ3လကျော်ပြီ... နဒါတုန်း
AdSense သည်ပင် စိတ်ပျက်စရာတစ်ခုအဖြစ် သက်သေပြနေပါသည်… ကျွန်ုပ်သည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော စာမျက်နှာကြည့်ရှုမှုများနှင့် တစ်စွန်းတစ်စမျှ မရရှိသည့်နေ့ရက်များ (ရက်သတ္တပတ်များအထိ) ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် အမှားတစ်ခုခု လုပ်မိနေမည်မှာ သေချာသောကြောင့် ကူညီပေးရန် AdSense ဆရာကြီးတစ်ဦး လိုအပ်သည်ဟု ဝန်ခံပါသည်... ကြော်ငြာကွန်ရက်နှစ်ခုလုံးအတွက် စိတ်ပျက်စရာအဆင့်များကို မကူညီနိုင်သေးကြောင်း ဝန်ခံပါသည်။
အိုး... မင်းရဲ့ ပို့စ် မှတ်ချက်တွေကို Doug က အပိုင်စီးရလောက်အောင် 🙂 တောင်းပန်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ ငါနဲ့ ထိမိတဲ့ အချက်တစ်ခုပါပဲ။
သြဂုတ် 3, 2007 မှာ 8: 13 AM
Text Link အချက်အလက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကားသံလိုက်? မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာ ရေးခဲ့တယ်။
သြဂုတ် 3, 2007 မှာ 9: 24 AM
မင်းရဲ့ပို့စ်က ငါ့ကို စိတ်အားထက်သန်စေတယ်။ ငါက တဆင့် အမိန့်ပေးတယ်။ ဂရပ်ဖစ်လန်း2ရက်အတွင်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စျေးနှုန်းက အရမ်းမိုက်တယ် ဒါပေမယ့် အရွယ်အစားကို ဂရုမစိုက်မိမှာကို ကြောက်တယ်... အရမ်းကြီးတယ်။ 🙂
သြဂုတ် 3, 2007 မှာ 10: 57 AM
မိုက်တယ်! ကျွန်တော့်ရဲ့ ပို့စ်တွေကို စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။
သြဂုတ် 3, 2007 မှာ 11: 48 AM
tailgate သံလိုက်ကို ချစ်ပါ။ ကားရဲ့ဘေးနားက လိုဂိုကို ခြယ်မှုန်းပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ငါ TLA ကို တစ်ချိန်ချိန်မှာ ထပ်စမ်းကြည့်ရမယ်၊ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ သူတို့က ငါ့ကို လက်ခံမလားဆိုတာ ကြည့်ရမယ်။ AdSense သည် ပြီးခဲ့သည့်လက ကျွန်ုပ်အတွက် 50% တက်ခဲ့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးမားသောစျေးဟု မပြောလိုပေ။